Fahfaahin ku saabsan diyaarad ku dhacday Garoonka Beledweyne | Keydmedia
Fahfaahin ku saabsan diyaarad ku dhacday Garoonka Beledweyne
Ilaa haatan ma cadda waxa sababay shilka, hase yeshee warar hordhaca ah ayaa sheegaya in diyaaradda ay baalka ku dhufatay carro loogu talgalay dhismaha Garoonka Magaalada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa shil diyaaradeed, oo maanta ka dhacay Garoonka magaaladda Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Diyaaraddan oo nooceeda yahay "The De Havilland Canada DHC-8" oo loo yaqaano [Dash 8] ayaa la sheegay inay ahayd nooca xamuulka qaada, waxayna saakay kasoo duushay dalka Jabuuti iyadoo gobolka Hiiraan usoo qaaday gargaar bini'aadanimo, oo loogu tala-galay dadkii ay saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha.
Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda ay baalka ku dhufatay carro loogu talgalay dhismaha garoonka Magaalada xilligii ay degi ratay waxaana kadib qabsaday dab xoog leh markii ay ka baxday dhabaha. Dadkii saarnaa oo ka koobnaa duuliyaha iyo labo kale oo shaqaale ah ayaa laso badbaadiyay iyagoo badqaba.
Sawirro goobta laga soo qaaday ayaa muujinayay uuro madow oo cirka isku shareertay, iyadoo dabka uu baab'iyay qeybo kamid ah diyaaradda iyo sahaydii gargaarka ay waday. Shilalka diyaaradaha ayaa mudooyinkii dambe kusoo badanayay Soomaaliya.